10 Fairytale-ulo-ikwū Na Italy Ị Ga Gaa Leta | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Fairytale-ulo-ikwū Na Italy Ị Ga Gaa Leta
E nwere ọtụtụ ihe fairytale castles na Italy ị ga-eleta! Dị otú ahụ na a ogologo, ọgaranya akụkọ ihe mere na omenala, mba a bụ ebe na-aga n'ihi na ịgagharị castles. Iji nyere gị aka atụmatụ gị na njem, ebe a na- 10 fairytale castles na Italy na ị na-na-na-aga na-enwe:
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata banyere omumu nke Chianti mmanya, nke a bụ ebe ị ga-aga. A nnukwu ụlọ ihe onwunwe sprawls n'elu 3,000 acres, zuru ezu na ubi vaịn na ubi oliv. Ọzọkwa, ọ bụ nnọọ ọmarịcha na-ahụ mgbe a anyanwụ dara tour.
Taranto ka Fasano Ụgbọ oloko
The mara mma ugwu Tuscany ozuzo a na anya-akụta nnukwu ụlọ na pụrụ iche na ije. Ya narị afọ nke 19 nwe chọrọ redesign ya Oriental mmetụta. Yabụ, o nyere ya a flair na ọ dịghị ndị ọzọ Italian nnukwu ụlọ nwere ike dakọtara.
Salerno ka Paestum Ụgbọ oloko
Naples na Paestum Ụgbọ oloko
Na-achọ ihe a bit dị iche iche? Na a nnukwu ụlọ, ị pụrụ ịnụ ụtọ a-atụrụ ndụ getaway na ọ bụghị naanị mma nke ije na gburugburu ya. Ebe ọ bụ na 1700s, a nnukwu ụlọ guzoworo nche na inyefe ugwu nta nke ebe ma ugbu a, a hotel na ọtụtụ eji enyere ndụ aka.
Wuru na-10th narị afọ, Valenzano nnukwu ụlọ bụ otu n'ime ndị kasị ochie fairytale castles ka ha guzo na Italy. Taa ọ bụ ka na-dị nnọọ ka nnukwu na ebube dị ka ọ bụ mgbe ahụ. Otú ọ dị, kama na-eje ozi dị ka onye na-eche nche, a nnukwu ụlọ bụ now a hotel, zuru ezu na tennis n'ụlọikpe na golf ọmụmụ.
Nke a fairytale nnukwu ụlọ akụkọ malitere ihe karịrị otu puku afọ gara aga, na ihe onwunwe na-gbanwere aka n'etiti meriri ọtụtụ ugboro eri. Otú ọ dị, ọ bụ a udo ebe n'oge, na ọtụtụ ugbo Njirimara na ubi-vine. Visitors hụrụ ya n'anya n'ihi na nke na-adọrọ mmasị n'akụkọ ihe mere eme na ebube ije.
E nwere ihe na-akpali akụkọ banyere otu onye nke elu. Dị ka ndị obodo ahụ na-ekwu, ọ bụ na-ezu ike n'ebe onye nke mbụ ya nwe. kọrọ, ọ na-eji igbachi elu-eleta ndị na-na otu ụlọ elu, nke kpasuru onye ndị mmadụ. Otú ọ dị, akụkọ abụghị naanị ihe na-adọta ndị ọbịa. ọmarịcha echiche nke ndagwurugwu gbara ya gburugburu na nnukwu ụlọ mee njem kwesịrị ya.
Nke a pristine achọ nnukwu ụlọ awade pụtara echiche na ohere magburu onwe ya na-amụ ije nke Renaissance oge. Ọzọkwa, ọ bụ onye ọzọ nke puku afọ nọ n'agbata n'etiti Italian castles. Nke a fairytale nnukwu ụlọ dị nso Florence, na na ọ bụ ukwuu n'ihi na a ụbọchị njem si n'ebe.
Pompei ka Paestum Ụgbọ oloko
Ike Paestum Ụgbọ oloko
Cabbiavoli Castle nwere ike ịbụ zuru okè image nke a Tuscan nnukwu ụlọ. Na ya mara mma anya, ubi, ubi-vine, na oliv, a nnukwu ụlọ nanị nwere ya niile. Ị nwere ike ọbụna na-aga ịnyịnya ịnya mgbe ị gara na e!
9. Foto Ụlọ Nga Castle
Otu n'ime ihe ndị kasị nnọọ mma castles na niile nke Italy na-n'elu ugwu precariously na a cliffside. Na ebili mmiri nke Oké Osimiri Mediterenian ezumike n'elu oké nkume, na a nnukwu ụlọ looms n'elu ha. Ị ga-enwe ike ịgagharị ime, ma nnukwu ụlọ bụ ka mma n'ihi na foto.
Torre Del Greek ụgbọ oloko na Pompeii
Pompeii na Nocera Lower Ụgbọ oloko
Ụgbọ oloko na Salerno Nocera Inferiore
Ụgbọ oloko na Salerno Mercato San Severino
N'ihi na ihe niile na nkà na ndị hụrụ n'etiti ndị njem, Montegufoni ga-a na-adọrọ mmasị na-aga. Ọ bụ ebe obibi nke ndị a ma ama Room nke Masks, nwere Gino Severini mara mma frescoes. Ọzọkwa, ya anya nnọọ pụtara, na ọ bụ ebe onye ọ bụla nwere ike na-enwe.
Salerno ka Maratea Ụgbọ oloko
Bari ka Maratea Ụgbọ oloko
Naples na Maratea Ụgbọ oloko
Power Ụgbọ oloko na Maratea
Njikere-ahụ fairytale castles na Italy? Jide n'aka na-eme atụmatụ gị ezumike na AKWỤKWỌ gị Train Tickets n'oge!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Fairytale-ulo-ikwū Na Italy Ị Ga Gaa Leta” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede ma biko, nnọọ inye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-castles-italy%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#akụkọ ifo #traveleurope Leslọ europetravel italyvacation ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ travelitaly